शतप्रतिशत हकप्रदपछि समायोजन भयो एचआईडिसीएलको शेयर मूल्य - Parichaya.com
By परिचय	 On २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १५:०२ 0
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआईडिसीएल) को शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि शुक्रवार बुक क्लोज गरेकाले नेप्सेले मूल्य समायोजन गरेको हो।
कम्पनीको बिहीवार कायम अन्तिम मूल्य रू. ५८८ को आधारमा मूल्य समायोजन गरी हकप्रद पछिको मूल्य रू। ३४३ तोकेको हो । आइतवार समायोजनपछिको मूल्यको आधारमा कम्पनीको शेयर कारोबार सुरु हुनेछ । बिहीवारसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र कम्पनीले निष्कासन गर्ने शतप्रतिशत हकप्रद शेयर खरिद गर्न पाउनेछन् ।
बोर्डले प्रतिकित्ता रू. १०० अंकित दरको १ बराबर १ को अनुपातमा रू. ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू। १६ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यो हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
पाकिस्तानमा सडक दुर्घटना, १८ को मृत्यु, ३० घाइते